Izinhlelo Zokusebenza Empini: IMicrosoft ivikela wonke umuntu! | Kusuka kuLinux
Namuhla, i-current «Sistemas Operativos» ngaphezu kwakho konke «Windows» Basemjahweni ovulekile wokuhlunga okuhle kakhulu kwabanye futhi bathumele imikhiqizo yabo kubo. Okwamanje «Microsoft», Inkampani ye URedmond, e-USA, umnikazi we «Windows», izuze ngamasu amasha futhi amangazayo angajwayelekile, ukwenza okwakho, ukugcina isabelo semakethe esikhulu kunazo zonke se- «Sistemas Operativos» de amakhompiyutha Emhlabeni jikelele. Kuzuzwe lokhu isigamu sokuqala sika-2019 ukwazile ukuqoqa okungaphezu kokukodwa 80% kuwo
«Windows» manje kubonakala sengathi, esikhundleni sokumenza impi yoku «MacOS» y «GNU/Linux», noma «Android» y «iOS», wenza uthando kubo. Umbuzo okufanele sizibuze wona ngukuthi: Bekungeke yini lokhu kube omunye walabo bathandi ababulala?
1 Izinhlelo zokusebenza: Ukushaja kweMicrosoft
1.2 I-Android ne-iOS
2 Izinhlelo Zokusebenza: I-GNU / Linux ekulweni nayo
Izinhlelo zokusebenza: Ukushaja kweMicrosoft
Impela, abanye abasebenzisi be «MacOS» futhi ngaphezu kwakho konke «GNU/Linux», izobe iphikisana, futhi abanye bavuna. Ngicabanga ukuthi, okungenani emhlabeni obanzi, okhululekile futhi ovulekile we «Linux» nokuhlukahluka kwayo okuningi, iningi lizophikisana, noma okungenani eyodwa isikhundla sokungathembani noma ukungathembani maqondana nemikhiqizo ye- «Microsoft» noma enye indlela ye- I-GAFAM mayelana neyethu «Linux», ngenxa yomlando wabo we ukusetshenziswa kabi kwedatha yomsebenzisi.
Akubalwa, izici ze- «Telemetría, Spyware y Adware» noma ubuthakathaka obuvame ukutholakala kuzo. Futhi lokho akuvamisile ukutholwa kanye / noma ukuxazululwa ngempumelelo nangendlela efanele njengalezo ezitholakala kwabanye, ikakhulukazi ku- «Linux».
«Windows» Akungeniswanga kuphela (kufakiwe) «Kernel» (Terminal/Comandos) de «Linux» ngaphakathi kuye, kepha ngaphakathi kwakhe isitolo sewebhu, manje ivumela ukulanda kwe Ukusabalalisa (i-Distros) okuphelele nokusebenza.
Ngaphezu kwalokho, ifaka phakathi ngokuqhubekayo i- «Ecosistema Linux» izinhlelo zokusebenza ezifana: «SQL Server, .Net, Visual Studio Code y Skype». Futhi kungekudala, uthembisa ukumfaka «Navegador Edge», the «Antivirus Defender». Futhi ngubani owaziyo, ngokungazelelwe umangaza wonke umuntu nge «Suite ofimática MS Office» yeLinux.
Kepha «Android» y «iOS», «Microsoft» yenziwe yatholakala kubasebenzisi be-said «Sistemas Operativos» amadivaysi eselula Android y iOS:
IZwi, i-Excel ne-PowerPoint
I-Outlook, i-OneNote, ne-OneDrive
I-Skype, i-Office Lens, i-Yammer, i-Delve, amaqembu kanye nokusakaza
para «MacOS», «Microsoft» usebenzise izinhlelo ezilandelayo kuyo:
Izwi, I-Excel ne I-Power Point
I-Outlook, I-OneNote ne- I-OneDrive
Amaqembu, I-Skype ne- Ideskithophu ekude
Abanye: IMicrosoft AutoUpdate, Defender ATP, phakathi kokunye. Futhi manje sekuzoqala inguqulo ye-beta ye-Edge.
Izinhlelo Zokusebenza: I-GNU / Linux ekulweni nayo
Iqiniso ukuthi, isikhathi eside, i- «Comunidad del Software Libre y Abierto» ihlasele i- «Ecosistema Privativo y Cerrado» ukwenza kutholakale, izinhlelo eziningi nezinhlelo ezihlukile kulabo izixazululo zendabuko nezentengiselwano ze-IT okunqoba kuyo, kokubili okungafakeleka kalula nokusebenzisekayo. Ngeke sibabhale kule ndatshana ngoba ziningi kakhulu futhi kuningi osekuvele kubhaliwe ngazo kulokhu Blog nabanye abaningi.
Kepha uma kufanele ukusho, ukuthi kunamawebhusayithi amaningi azinikele kuwo esingakwazi ukuwahlola ukuze siwazi, siwasebenzise futhi sihlanganyele ngawo, futhi ngalokho sigweme «Microsoft» hlasela yethu «Ecosistemas Libre y Abierto» nezinhlelo zayo ezigcwele ukuthi ngubani owaziyo ukuthi yimaphi amakhodi angewona mahle kangako, alula noma awubi neze.
Iphrojekthi Ehlukile yeLinux
Futhi kushiwo ngokubhuka amawebhusayithi asemthethweni we:
Namuhla, singasho ngokufanele ukuthi sisesimweni soshintsho ekuziphatheni komsebenzisi, maqondana nobuchwepheshe obutholakalayo, amandla emakethe kanye izixazululo ze-IT ezinqamulelayo. Futhi lokho, ngokuya nge «Sistemas Operativos» wabasebenzisi bamakhompyutha wedeskithophu namadivayisi eselula, «Microsoft» ngokulangazela ifuna ukwanelisa izidingo eziningi kokuhlangenwe nakho okukodwa.
Lokho okungukuthi, zama lokhu I-Multipolar IT world noma i-Diverse IT Ecosystem zihlala zixhomeke kakhulu noma zigxile kakhulu kuningi layo elingenakuphikiswa futhi elinamandla. Ngakho-ke, sisele nomzabalazo wansuku zonke futhi oqhubekayo wawo wonke «Comunidad del Software Libre y Abierto» ukungakhohliswa ukunikezwa okuhehayo kokusebenzisa okwehlukahluka nokuchichimayo Izixazululo ze-IT «Microsoft» cishe «Linux», ikakhulukazi.
Ngiyethemba lokhu kucabanga okuncane ngokuthi yini akuphephile futhi / noma kuyingozi sinjani isimo se «Microsoft» kanye nezicelo zayo ezihlasela ezethu «Ecosistema Libre y Abierto» de «GNU/Linux» Qhubeka setha ama-alamu kukho konke. Njengoba ngandlela thile, sonke siyazi noma siyasola ukuthi akukho okuhle okuzayo, nezinhlelo zokusebenza zalo zigcwele i-Telemetry, Spyware ne-Adware.
Kufanele sikuqonde lokho, yize izinhlelo zokusebenza ezikhulayo nezinhlobonhlobo que «Microsoft» uyasinikeza, okunikezwayo kwakho kufanele ngaso sonke isikhathi kubhekwe ngokusola ngenxa ye- Inkululeko isatshalaliswa yi «Software Libre y Abierto». «GNU/Linux», ngoba uMphakathi wethu uhlale unikela ngezinhlelo nezinhlelo «Microsoft», kodwa i «Software Libre y Abierto» o «GNU/Linux» akanamakhadi phezulu komkhono wakhe, futhi bayakwazi.
Okokugcina, kuwebhusayithi ye Isabelo Semakethe Esiphelele ungabona ngokuningiliziwe ukuthi ifayela le- izibalo zamasheya ezimakethe phakathi kwe- «Sistemas Operativos» zamanje, phakathi kolunye ulwazi olubalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Izinhlelo Zokusebenza Empini: IMicrosoft on Guard Against All!
Kusuka ku-2% noma ngaphezulu okuvele ngaphambi kwe-PC linux kuya ku-1,39%, kuyabonakala ukuthi iMicrosoft iyenge abaningi.
UCristhian Herrera kusho
Futhi uyakhokhelwa ukubhala? I-Linux yayingakaze isondele ekutholeni isabelo esibalulekile kumakhompyutha wakho, uma ngabe kwenzeka kumaseva. Ngokuqondene nehhovisi ezishintshayo, iMicrosoft Office iyona suite engcono kakhulu ekhona.
Phendula uCristhian Herrera
UNkk Office muhle, kepha wonke umuntu usebenzisa futhi abheke okungcono kakhulu okulungele izidingo zabo, kanye nezinye izinto ezibalulekile njengezindleko, isivinini nokusebenza. Ngisebenzisa futhi ngiyayithanda iLibreOffice.
Yebo, ukusebenzisa i-GNU / Linux Distros ku-Windows kuyenga impela ukubulala izinyoni ezi-2 ngetshe elilodwa. 🙁
Kubukeka sengathi ubuciko ezinhlelweni sebuphelile ngomphakathi wamahhala we-GNU ngoba basathanda ukuthi i-MS Office ingene ku-ecosystem yeLinux, ingakhohlwa ukuthi i-MS ithathe izinqubo ezibalulekile ngamalungelo obunikazi ayo, ishiya insimu encane yentuthuko yomphakathi mahhala.
UFeliksi manuel kusho
Ukufaka i-NET ku-Linux kwamukelekile. Ngiyethemba ukuthi ngelinye ilanga iMicrosoft Office iza eLinux ngoba iyi-suite engaqondakali.
Phendula uFelix Manuel
Ngeke kube kubi, kepha ngokufanelekile bazokhipha ikhodi ezothuthukisa iLibreOffice. Lokho kungaba ngumqondo omuhle ongabalandela!
I-GNU / Linux (kimi i-Debian 10) ingaqhathaniswa ne-oasis maphakathi nogwadule olushisayo noluyingozi, indawo lapho ufike khona ngokuzikhandla wathola ukuthula, inhlalakahle nokuthula, futhi okungcono ukuthi ungashiyi kukho.
Manje ugwadule lufuna ukuhlasela i-oasis yethu, kuzoncika ekutheni sikubani kuyo.
Akukho lapho ungaya khona ……
UToni CG kusho
Esikhundleni sokuthi "ulwe" ungahlanganyela kuwo womabili amaphrojekthi. Lolo lwazi lutholakala kuwo wonke umuntu.
Phendula ku-Toni CG
Impela, kepha imidondoshiya yezobuchwepheshe kufanele igcinwe futhi inakekelwe ngaso sonke isikhathi.
Kusasa ekuseni (lapha eMelika), ngizovula i-PC futhi into yokuqala engizoyenza ukufaka Ubuntu ku-Windows. Kusuka Microsoft Store. Akungikholwanga ukuthi lokho kuyasebenza. Angazi. Ngaphandle kokuba semshinini obonakalayo. <:
Siyabonga ngokuphawula kwakho. Ngicabanga ukuthi uma kusebenza kahle, kepha usitshela nganoma yisiphi isehlakalo noma izindaba ngakho.
Empeleni akusilo uhlelo oluphelele lokusebenza olufaka isistimu engaphansi yeWindows yeWindows, kepha ikuvumela ukuthi usebenzise: iBash, iGit, APT, DPKG, SSH.
Lokhu kusebenzisa i-terminal, git, apt ukucinga amaphakheji, njll, i-dpkg ukufaka amaphakheji, njll.
I-Linux 5.4 rc7: yini okusha ekukhishweni kwe-kernel entsha